रवि लामिछानेको गीत गाएर ३ करोड नेपालीको मन जित्ने यी गायक भन्छन,”काठमाडौँ भनेको बाउले खाने र छोराले हेर्ने ठाउँ रहेछ” ( भिडियो ) - Purbeli News
रवि लामिछानेको गीत गाएर ३ करोड नेपालीको मन जित्ने यी गायक भन्छन,”काठमाडौँ भनेको बाउले खाने र छोराले हेर्ने ठाउँ रहेछ” ( भिडियो )
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ २७, २०७५ समय: १९:२२:२८
भक्तपुर – नीलमणि भण्डारी एक कुशल गायक हुन्। उनी शारीरिक रुपमा अशक्त छन्। उनका हात खुट्टा मध्य एक हात मात्रै राम्ररी चल्छ। भोजपुरमा जन्मिएका नीलमणि भण्डारी गायक बन्ने ठुलो सपना बोकेर काठमाडौँ आएका हुन्। उनी प्राय दोहोरी गीतहरुबाट चर्चित छन्। उनले हालै पनि रवि लामीछानेको समर्थनमा व्यङ्ग प्रहार गरि गीत प्रस्तुत गरेका थिए जुन निकै भाईरल बनेको थियो।
संघर्षको दिनहरु सम्झिदै भण्डारी भन्छन,’सुखका क्षणहरु कमै छन्। वि.स २०५७ सालमा गायक बन्ने उद्दश्यले काठमाडौँ आए। काठमाडौँ भनेको त बाउले खाने र छोराले हेर्ने ठाउँ रहेछ। अशक्त भएका कारण धेरै दुख भोग्नु पर्यो।’ थोरै पैसा बोकेर जन्म थलो छोडेर कर्म थलो बनाउन राजधानी होम्मिएका गाउँको सोझो भण्डारीलाई एक जना रेडियो नेपालको कर्मचारी बताउने व्यक्तिले रेडियोमा गीतको अबसर दिन्छु भनेर ४ हजार रुपैया लिएर फरार भएको तितो अनुभव उनले सुनाए।
भण्डारीलाई ठग्ने व्यक्तिको खोजीको क्रममा रडियो नेपालमा कार्यरत राम थापासँग उनको भेट भयो। त्यसपछि उनले रेडियोमा गीत गाउन पाउनुको साथै स्वर परिक्षाको अवसर पनि प्राप्त गरे। त्यसरी उनको सांगेतिक यात्रा शुरु भएको उनले बताए। उनले पहिलो रेकर्ड गराएका गीत ‘कुइरो लाग्यो’ थियो जसमा उनको आफ्नै शब्द र लय छ।
उनी जन्मिएको सात महिनाको हुँदा हातमा घाउ आएको थियो। खासमा उनलाई पोलियो लागेको थियो तर उपचार गर्न अस्पताल लानु पर्ने ठाउँमा सबैको कुरा सुनेर धामी झाक्री कहाँ लगियो। झाक्रीमाथिको अन्धविश्वासले गर्दा अस्पताल लान ढिलो भएका कारण उनको शरीर नै अपाङ्ग भएको उनले बताए। यदि बिकसित ठाउँमा उनी जन्मिएका भए सायद आज अरु जस्तै सपाङ्ग हुने थिए। उनी यसलाई आफ्नो भाग्यमा लेखिएको भागभोग मानेर चित्त बुझाउने गर्छन।
उनले आफु अशक्त भएका कारण सांगेतिक यात्राको क्रममा निकै चुनैतीको सामना गर्नु परेको उनले बताए। यस क्षेत्रमा आएपछि धेरै मिडियाले बोलाउने गर्छन तर मिडियाहरु ४/५ तल्लामाथि हुन्छन जसले गर्दा हामी जस्तालाई जान अप्ठ्यारो हुने उनको भनाई छ। उनी भन्छन,’नेपालमा अझै पनि शिक्षित् बनिसकेको छैन। धेरै शिक्षित भएता पनि कोहि यस्ता भेटिनछन् जसले शारीरिक रुपमा हामी जस्ता अपाङ्गलाई सभ्य भाषाबाट सम्बोधन नगरी होच्चाएर बोल्ने गर्छन जसकारण मन दुख्ने गर्छ।’
उनले रवि लामिछानेले समाजको लागि राम्रो काम गरिरहेको उनले बताए। उनले समाज सेवीहरुको बारे देखि समाजको अबस्थालाई चित्रण गरि गीत लेखें गाउने गर्छन। भण्डारी अझै सांगेतिक क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको र अझ राम्रो गायक बन्न बाँकि रहेको उनी बताउँछन। उनले आगामी दिनमा विदेशमा बस्ने नेपाली जसले पिडामा परेका व्यक्तिलाई आफ्नै दुख सम्झेर सहयोग गर्न्र सहयोगी मनहरुको बारेमा गीत गाउने बताए। उनी गायन क्षेत्रको साथै मिडियामा पनि आबद्ध छन्।
पल संग प्रेमका कुरा, भ्यालेण्टाईन डेमा कस्लाई हो प्रेमका सब्दहरु ? (भिडियो सहित)
पोखरामा दिन दिनै काण्ड । मंगलवार १४ वर्षिय सचिनको घाँटी रेटेर विभत्स हत्या
तेलमा डुबेका बालकलाई शिशिर भण्डारीले भेटे । सहयोग दिदै भने- तिमी भुत हैनौ, भगवान हौ(भिडियो हेर्नुस)
बिरामी श्रीमती कुर्न बसेका श्रीमानले घाँटी थिचेर श्रीमती मारेको आरोप [स्थलगत रिपोर्ट]
सोनिकाले बाहिर ल्याईन गहन बिषय ‘पुरुषबाट पुरुष नै बलत्कृत’, के हो यथार्थ ? हेर्नुस् भिडियो सहित
श्रीमतीलाई छ्यापेको एसिड आफ्नो छोरीको मुखमा पोखिएपछी- हेर्नुस यो दर्दनाक घटना भिडियो सहित
६ श्रीमतिका बुढा खान बस्न नपाएको भन्दै धरधरी रोए ! तुईन तान्ने बुढा अन्र्तबार्तामै मर्छु भनेपछि…(भिडियो)